सुजीतकुमार झा जनकपुर, १९ जेठ
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण जनकपुरधामको ऐतिहासिक दशराहा मेला प्रभावित भएको छ । मेलाका अवसरमा विगतमा दशरथ तलाउमा नुहाएर दशरथ मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्ने परम्परा रहेको थियो ।
यो वर्ष भने लकडाउनका कारण प्रहरीले दशरथ तलाउमा कसैलाई नुहाउन दिएका छैनन् । मन्दिर पनि यो वर्ष बन्द छन् । मेलाको अवसरमा विगतमा नेपाल-भारतबाट ठूलो संख्यामा भक्तजन जनकपुरधाम आउँथे ।
सबै प्रकारको कष्ट निवारणका लागि गंगा दशराहामा दशरथ तलाउमा नुहाउन भक्तजन आउने गर्छन् । जानकी मन्दिरका महन्थ राम तपेश्वर दास वैष्णव भन्छन्, ‘जनकपुरधाम आउने व्यक्ति गंगा सागर, धनुष सागर र दशरथ तलावमा एक पटक नुहाउने नै गर्छन्, फेरी गंगा दशराहाको बेला दशरथ तलाउकै कुरो गर्छन् ।’
भारतको सीतामढीबाट गंगादशराहामा नुहाउन जनकपुरधाम आएकी मधुवनी बाली भन्छिन्, ‘म त २० वर्षदेखि दशराहामा लगातार जनकपुरधाम आउँदै गरेकी छु ।’ उनी याे पटक लकडाउनका कारण भारतबाट पैदल जनकपुरधाम पुगेकी हुन् ।
गंगा दशराहाको महत्त्व
गंगा दशराहा गंगासँग सम्बन्धित रहेको छ । जेष्ठ शुक्ल दशमीका दिन माता गंगाको पृथ्वीमा अवतरण भएको थियो । त्रेता युगमा अयोध्याक राजा सागरको ६० हजार पुत्रको मृत्युपछि गंगा पृथ्वीमा अवतरण भएकी थिइन् । उनलाई सूर्यवंशी राजा भागिरथले धेरै तपस्या पश्चात पृथ्वीमा ल्याएका थिए ।
यही अवसरमा दशराहा मनाउने गरिन्छ । यसदिन गंगा नदीमा उभिएर ‘ऊँ नमो भगवती हिलि हिलि मिलि मिलि गंगे माँ पावए पावए स्वाहा’ मन्त्र पढदा सबै प्रकारको कष्ट निवारण हुने स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ ।
स्कन्द पुराणका अनुसार यो मन्त्र पढ्दा दश पाप नष्ट भएका कारण यसलाई दशराहा भनिन्छ । ब्रह्म पुराणमा यसदिन मनसा-वाचा-कमर्णा तीनै प्रकारले हुने दश दोषको निवारण गंगा स्नानले हुँदै आएको उल्लेख रहेको छ ।
गंगा दशराहाको रामयण प्रसंग
गंगा दशराहाबाट रामायणको प्रसंग पनि जोडिएको छ । सीता हरणपछि भगवान श्रीराम लंका जानुपूर्र्व पुल बनाउने समय दशराहाको तिथिमा पूजा अर्चना गरेकोे रामायणमा उल्लेख रहेको छ ।
यो पर्व जेष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भई दशमीसम्म भएको कारणपनि दशराहा पर्व भनिएको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ । धेरै व्यक्ति यसैकारणले होला दशराहामा दश दिनसम्म विशेष पूजापाठ गर्ने गर्छन । जानकि मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णव दश दिनसम्म जनकपुरधामको दशरथ तलावमा नुहाएर रामजानकीको पूजापाठ गर्ने परम्परा रहेको उल्लेख गरे ।
गंगा दशराहामा आफ्नो इच्छानुसार दान गर्ने चलन रहेको छ । जनकपुरधाममा मुख्य रुपले आँप, च्यूरा, सतु, पंखा, कपडा दान गर्ने गरिन्छ ।
दानको विषयमा पुरहित पेसासँग आवद्ध पण्डित विद्यानन्द झा भन्छन्, ‘जनकपुरधाममा दशरथ तलावमा नुहाएर केही व्यक्ति गरीवलाई त केही व्यक्तिले ब्राह्मणलाई दान गर्ने गर्छन् ।’ आफूले दशरथ मन्दिरमा रहेको भिखमंगालाई आँप च्यूरा र कपडा दिएर आएको सीता देवीले बताइन् । दान दिने र दानलिनेको भीडपनि लागेको थियो । जनकपुरधाममा हरेक धार्मिक उत्सवमा दानको परम्परा रहेको मटिहानी मठका महन्थ जगरनाथ दास वैष्णवले बताए ।
दशरथ मन्दिरको प्रसंग
दशरथ तलाउको पश्चिम उत्तर घाटमा रहेको दशरथ मन्दिरमा यस अवसरमा पूजापाठ गर्ने गर्छन । भगवान श्रीरामको बुवा दशरथको जन्मदिन पनि यसै तिथिमा रहेको छ । भगवान् श्रीरामको बुबाको नाउँमा स्थापित यस मन्दिरमा दशरथका अतिरिक्त रामजानकीको मूर्ति पनि रहेको छ ।
भारतको विहार राज्यको दरभंगा जिल्लाका पचारी मठबाट जनकपुरधाम आएका वनवारी दास वि.स. १९५८ मा यस मन्दिरको निर्माण गरेका थिए ।
उनी जनकपुरधामका महन्थहरूमा सबैभन्दा जानकार महन्थको रूपमा चर्चित थिए । वनवारी बाबाद्वार बनाइएको मन्दिर टुटे पनि अहिलेपनि भग्नावशेष कायमै छ । सो मन्दिरलाई मटिहानीका मानमहन्थ स्व. कौशलकिशोर दास वैष्णवले जिर्णोद्धार गरेका थिए ।
दशरथ मन्दिरको जनकपुरधाममा विशेष महत्व रहेको छ । इतिहासकार स्व. शिवेन्द्र लाल कर्ण लेखेका थिए, ‘दशरथ मन्दिरमा दशराहामा पूजा पाठ गर्नुका साथै रामजानकी विवाहपञ्चमीको बेलो स्वयंवरभन्दा राम मन्दिरको डोला दशरथ मन्दिरमा विहेको अनुमति लिन पुग्ने गर्छन योे दृष्य धेरै महत्वपूर्ण हुने गर्छन् ।’
असोज शुक्ल विजया दशमीका दिन बाजागाजाका साथ राम मन्दिरबाट भगवानको डोला दशरथ मन्दिरमा टिका लगाउन आउने गर्छन् ।
दशराहामा आँप च्यूराको महत्त्व
दशराहामा दशरथ तलाउको स्नानपछि तलाउकै किनारामा आँपच्यूरा खाने गर्छन् । जनकपुरधामका स्थानीय व्यक्ति होस् वा बाहिरवाट आएकाहरू आँपच्यूरा खाने नै गर्छन् । इतिहासकार स्व. शिवेन्द्रलाल कर्णले पनि दशराहासम्बन्धी एकटा लेखमा स्वीकार गरेका छन् । 'दशरथ मन्दिरमा आँपच्यूरा चढाउने गरिन्छ, प्रसादीको रूपमा खाने गरिन्छ,' सो लेखमा उल्लेख छ । हुन त धेरै व्यक्ति दशरथ मन्दिरमा चिनियाँ लड्डू चढाउने गर्छन् तर तलाउको किनारामा आँपच्यूरा खाने नै गर्छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १९, २०७७, ११:०९:००